आधुनिक मोटर स्नेहन प्रणाली, इन्धन प्रणाली र ज्वलन सिस्टम छन् जो बीच प्रणाली को एक अधिकता हुन्छन्। ती सबै समय परिवर्तन गर्न, परिवर्तन undergo र थप सिद्ध हुन्छन्। तर यसको अस्तित्व को सम्पूर्ण समय भर अपरिवर्तित रहेको छ कि अन्य भागहरु छन्। उदाहरणका लागि, एक सनकी संयन्त्र। तथ्यलाई यसको आविष्कार देखि, यो यसको मूल रूप मा रहेका छ भन्ने छ।
यसको प्रयोग एकदम मोटे छ र आन्तरिक दहन इन्जिन सीमित छैन। यसलाई जहाँ यो आवश्यक छ यस्तो सम्मेलन मा प्रयोग गरिन्छ translational आन्दोलन, यी आन्दोलनहरु को मात्र होइन एउटै अवधि, तर पनि स्थिर गति, को क्रैन्कशाफ्ट गोडा को लम्बाइ द्वारा सीमित छ जो प्रदान गर्न सक्षम छ रूपमा बित्तिकै।
सनकी संयन्त्र एक भाप स्थापना पहिलो लागू गरिएको थियो र त्यसपछि, आविष्कार को आन्तरिक दहन इन्जिन पछि, नवीनतम विकास मा सार्नु। त्यहाँ सेटिङहरू दुई प्रकारका छन्: एक, एक अगाडि गति बनाउँछ भन्ने विवरण गर्न क्रैन्कशाफ्ट देखि शक्ति पहुंचाता दोस्रो जडान रड अन्य अन्त मा छ जो पिस्टन देखि यो शक्ति हुन्छ।
अलग प्रत्येक भाग को उद्देश्य, विचार गर्नुहोस्। मुख्य भाग - एक क्रैन्कशाफ्ट। यो conversely, यो प्राप्त गर्न, फलामको डण्डाले मा शक्ति प्रसारित गर्न सक्नुहुन्छ वा। यसलाई उच्च-बल स्टील्स, अक्सर डाली फलाम बनेको बनेको छ। यो प्राप्त ऊर्जा भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ चक्का स्थित छ। धेरै मोटर चालकहरुलाई स्थापना एक हल्का चक्का एक सनकी संयन्त्र थप चुस्त बनाउन, आफ्नो इन्जिन मा। बस उहाँले चाँडै गति प्राप्त।
अब रड गर्ने। यो मा दबाव भारी हुन सक्छ किनभने पनि ठोस इस्पात ग्रेड को, बनेको छ। यसबाहेक, यो किनभने यसको विरूपण गम्भीर परिणाम भनेर क्षति र सिलेंडर छ, एक छडी म-च्यानल को आकार छ।
यो प्रतिक्रिया लीवर, अर्थात् सिद्धान्त प्रयोग पछि देखि सनकी संयन्त्र, रोटरी इन्जिन भन्दा ठूलो टोक छ, यसको शक्ति को गोडा को लम्बाइ गर्न समानुपातिक छ। यसैले निष्कर्ष: को को गोडा थप, उच्च टोक। अर्को वस्तु - पिस्टन। पिस्टन आन्तरिक दहन इन्जिन रूपमा क्रैन्कशाफ्ट ड्राइव गर्न सक्नुहुन्छ, वा कंप्रेशर्स मा रूपमा शक्ति बाट प्राप्त गर्न। यो सामान्यतया किनभने यो सम्पर्क को मामला मा सिलेंडर को पर्खाल हानिकारक जोगिन, नरम धातु एक आवश्यक छ, एल्यूमीनियम बनेको छ। को परिधि मा तिनीहरूले मुहर र दबाब वृद्धि गर्ने सेवा, पिस्टन छल्ले सम्मिलित छन् जसमा घैरा grooves छन्। यस मामला मा, ग्याँसहरु भन्दा काम।
एक एक प्यारामिटर अन्य मा एक हानि गर्न जान्छ गर्न अफसेट रूपमा इन्जिन को सनकी संयन्त्र, को टोक र गति औसत प्राप्त गर्न गणना गरिएको छ। पहिलो वृद्धि को माथि वर्णन विधि, तर यो मामला मा पिस्टन क्रांतियों को "छत" असर जो लामो दूरी, यात्रा गर्न हुनेछ।
VAZ मोटर विधानसभा माथिको फरक छैन। यो धेरै छिटो rotates रूपमा सनकी सबै भागहरु राम्ररी lubricated हुनुपर्छ भनेर नबिर्सनुहोस्। एकदम लगाउने कम जो बनाएको छ संभोग भागहरु दबाव तेल फिलिम बीच उत्पादन सुरु देखि।
अगाडि प्रतिस्थापन एक विशेषज्ञ को सहायता बिना VAZ-2109 struts
को Renault लगुना2मोडेल कसरी
वर्णन, प्रकार र निर्देशन: कार मा निशाना हटाउनका लागि suction कप
योनी ट्याब्लेटको 'Trykhopol'
आज एक "एन्ड्रोइड" फोन के हो?
कति प्यारो र starchy खाद्य पदार्थ लागि तरस को छुटकारा प्राप्त गर्न?
मानव गतिविधिको क्षेत्रहरू। उत्पादन के हो?
ज्ञात भलिबल Lesya Makhno